Apple n'etiti ụlọ ọrụ ndị nwere mmasị na ya maka afọ nke iri nke iri | Esi m mac
Iche iche onwe gị doo a akara. Theme otu ihe ahụ ndị asọmpi gị na-eme ka atụmatụ azụmahịa gị ghara ịdị irè na ogologo oge ma agaghị echeta gị maka ọrụ gị. N’ịchịkọta usoro nke 10 n’afọ ndị sochirinụ, Apple nọ n’elu ndepụta nke ndị a ma ama na magazin Fortune dị ka ụlọ ọrụ kachasị nwee mmasị na ya. N'ezie, a na-achịkọta ndepụta ahụ site na magazin ahụ ka ị tụlesịrị ihe karịrị ndị isi 3.800, ndị njikwa, ndị nyocha na ndị ọkachamara.
Ndepụta ahụ na-aga n'ihu na nnukwu ụlọ ọrụ aha dịka: Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway, na Disney.
Amazon ọ na-arịgo ọnọdụ na ndepụta ahụ, na-aga site na nke atọ na nke abụọ ma na-achọpụta enyemaka Google, Mkpụrụ akwụkwọ, nke dị ugbu a n'ọnọdụ nke isii.
Usoro maka ịkwadebe ndepụta a bụ ndị a: akwụkwọ akụkọ na-ahọrọ ụlọ ọrụ 1000 kachasị elu site na ọnụego ego ha nwetara, ụlọ ọrụ mba ụwa 500 kachasị elu nwere ego karịrị ijeri dollar iri. Agbanyeghị, dịka ndepụta ahụ toro oke ogologo, ọ họọrọ ịmepe aha ndị ụlọ ọrụ 680 sitere na mba 28. Ajuju ndi nabatara banyere ihe di iche iche dika ihe ohuru, ogo ya na oru ndi mmadu.
Akụkụ ọzọ dị ịrịba ama nke ndepụta ahụ bụ njikọta ọrụ ntanetị n'etiti Facebook na Microsoft, nke nọ n'ọnọdụ nke itoolu. N'aka nke ọzọ, Apple na-ama aka na teknụzụ, Samsung, si na elu 50 dị na ndepụta ahụ. Dị ka Fortune, ihe ndị mere na ntiwapụ batrị nwere mmetụta na-adịghị mma na nyocha ahụ.
Apple dị n’elu ndepụta ndị ọzọ dịka TEnwere m 500 na Gburugburu ụwa 500. A makwaara na na ndepụta nke Fortune 500, ụlọ ọrụ ahụ esiwo na ise gaa nke atọ, mana ịkpachara anya, n'ihi na ọ bụ ezie na na 2016 ụlọ ọrụ nwere ntụgharị nke ijeri dollar 233, na 2015 ụlọ ọrụ ahụ na-agbanwe agbanwe, na-enwe a uto na adighi nkpa na iPhone, ire ahia nke Apple Watch ma obu obere nsogbu nke iPad.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple n'etiti ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere mmasị na nke iri nke afọ iri